I-Recipe ye-kazari roll "cherry"
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Intlanzi Inkathazo
Imiqulu ephethe umfanekiso we-"cherry" Kazari iqhutywe kunye nephethini kwi-cut. Kwimenyu yasemakhaya le nto ingaba isidlo esityekisayo, ngakumbi xa sikhonjiswe njenge-assortment ye-sushi eyahlukileyo. Ukulungiselela ukulungiswa kweentlanzi, ndiloyiko ukusebenzisa intlanzi eluhlaza, ngoko ke ndiyilungisa i-salmon okanye i-trout: inxalenye yentlanzi enesisindo esingu-0.5 kg ityunwe ne-1 isipuni yetyuwa echithwe kwi-1 cupoac ye-cognac (utywala uyaphuma kodwa inika intlanzi), ndongeza i-pepper, kunye neziqholo - ukunambitha kwaye emva kweentsuku ezimbini ndizisebenzisa. Kwimeko ephakanyisiweyo ye-kazari "i-cherry" inhlanzi enopinki ibukeka njengamajikijolo, kunye neqabunga le-lettuce okanye amaqabunga eparsley - ngendlela yesigqabi namaqabunga.
Ilayisi ejikelezileyo i-100 g
Ingxaki encinci i-30 g
I-seaweed nori 1 pc.
Isaladi ehlaza okwesibini 0.25
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-"cherry" kazari rolls, uya kufuna isidlanzi esibomvu salwandle olubomvu, irayisi elulungele ukulungiselela i-sushi, iqabunga lesaladi okanye i-parsley twig kunye ne-nori sheet.
Inyathelo 2 Hlanza intlanzi uze uthathe izicucu ezincinci, ulwahlule i-nori sheet kwiindawo ezi-2. Beka isigxina se-nori kunye necwecwe elimnyama kwi-makis, ehlanjwe ngezandla zamanzi acidic, uthathe iziqephu zerayisi kwaye ubeke kuqala umgca ocebileyo welayisi, kwaye emva koko uvela kwiingxenye ezintathu ezincinci zerayisi ifom 3.
Inyathelo lesi-3 Vala irayisi ngesigamu sesibini se-nori, uphinda iphrofayili yomphezulu welayisi.
Isinyathelo 4 Beka iinxalenye zeentlanzi kwiindawo eziphambili, kunye ne-lettuce okanye iparsley kwimida.
Inyathelo 5 Ukuqaqa umqulu - iinqwelo zeentlanzi ziza kugoba kwi-nori, kwaye amaqabunga e-lettuce aya kubambisana. Hlaziya umqulu nge-makis.
Inyathelo 6 Kucetyiswa ukuba unike i-cadzari umqulu okwesikhashana, malunga nemizuzu eyi-10-15.
Inyathelo lesi-7 Yinqumle imiqulu ngokunyakaza okulula, ngaphandle kokuchukumisa iqela elibukhali elinamanzi. Khangela imiqolo nge-soy sauce kunye ne-ginger ehlanjisiweyo.
Hlanganisa ne-salmon kunye nemifino
Isaladi eluhlaza kunye ne-trout
Penne kunye nefuthe lokutshaya
Indlela yokwenza isisu esisisigxina, iingcebiso ezisebenzayo
Iifayile ze-50, izixhobo
Iimpazamo zabazali ekukhulisweni kwabantwana
Ukuphazamiseka kwemiba kunye nokubonakaliswa kwazo
Ukuhlamba i-oatmeal kunye nomphumo walo kwesikhumba ebusweni
Biography ka-Alexander Demyanenko
Inkqubo yokwenza abantwana